Version 0.7.0 – Mustaqbalka interface turjumaad!
January 12, 2011 by dalabyo 3 Comments
Release version weyn ee xigta Transposh halkan waa, iyo in ay u dabaal mar aan ka abuuray video gaaban (oo ku saabsan 11 daqiiqo) . Isbarashada cusub oo la heli karo in version cusub. You are badan ayaa soo dhaweeyay si aad u daawato video oo ku magacaabaan in ay abaal-marinta academy soo socda for update movies plugin turjumaad.
Waxa ugu horeeya ee aad aragto doonaa in version ku newer waa update ugu weyn ee interface user ah, waxaan ku daray laba sawir oo heer sare ah codsado in ay Qadaadka iyo sida soo socota / buttons hore, ansixiyo tarjubaano iswada iyo helidda jumlado in lagu tarjumay. Muuqaal kale oo xiiso leh oo aanu ku daray waa awoodda turjubaan si aad u aragto weedha ah ee asalka ah af kale haddii ay hore u ahaa turjumay si luqadda sheegay in hawlaha diiwaangelinta codbixiyeyaasha, sidaas ahayna kuma aad qabto blog ah oo Cibraani ah, kuwaas oo aad u turjumay si Ingiriisi, turjuman yaabaa inay awoodaan inay u tarjumaan aad site ka soo Ingiriisi si luqad kale, kuwaas oo laga yaabo in si fudud isaga. Waxaan u mahadnaqayaa Xaanaan waayo asal ahaan weydiisanaya habkaani. Waxa kale oo suuragal hadda in laga saaro tarjumadood ee ka soo hadal taariikhda, taas oo ah tallaabo jihada ee ka shaqeeya xakamaynta loo adkeyn on tayada turjumaad.
Hadaba sidoo kale waa sleeker, qaba UI u gooyeen in sidoo kale waa localizable iyo themable, aad dhigay karaa mawduuc ee goobaha widget, iyo meel wanaagsan oo si aad u hesho gacanta ku saabsan sida ay u eegi doona waa themeroller. Haddii aad rabto in aad inoo caawin by tarjumidda Qadaadka si aad luqadda iyo dhibco ah waxa loogu talagalay, fadlan noo soo sheeg adiga oo isticmaalaya xiriir ayaa noo soo xulashada kor ku xusan.
Hubka jinsiyad ayaa weli waxaa ka ee horumarka, iyo Transposh waa plugin ugu horeysay (in aynnu og nahay) si ay u taageeraan (runtii taageeraan, taageero ka shaqeeya) ee 60 luqado by daray taageero Isberento isticmaalaya Apertium engine, waayo, hadda waxa kaliya oo u shaqeeya blogs Ingiriisi iyo Isbaanish, laakiin dari doonaa luqado badan oo kor baahida.
Qaar badan oo ka badan go'an way ku jiraan, updates database, muddo dheer oo u doonatay turjumaad furayaasha Meta, iyo qaar kaloo badan – xiritaanka ~ 15 tigidhada on our trac.
Ugu dambeyntii – credits for turjumaanimo ugu sii this tag: Amir isaga oo tarjumad Cibraaniga iyo Ignacio turjumaadda Isbaanish, guys mahad!
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: 0.7, apertium turjumi, yaryar, luqado badan oo, sii daayo, themeroller, UI, video